Ahoana ny fangatahana famerenam-bola ao amin'ny App Store | Vaovao IPhone
Azo antoka fa mihoatra ny indray mandeha nividy fampiharana ianao ary avy hatrany dia nanenina hanao izany satria tsy araka ny noeritreretinao azy io, na mahatsapa ho voafitaka ianao satria mamoaka vaovao tsy marina amin'ny famaritana ilay rindranasa ilay mpamorona, mampanantena zavatra izay tsy ho vitanao mihitsy. Mety ho izy koa no nividiananao taratasy fangatahana tsy nahy, na hoe olon-kafa no nanao izany ho anao nefa tsy nahazo alalana. Betsaka ny antony mety hieritreretanao ny hitakiana ny volanao amin'ny Apple, ary amin'ny zavatra niainako manokana, na eo aza ny zavatra andrasan'ny ankamaroan'ny olona, ​​dia mazàna mamaly tsara i Apple.
Azo antoka fa maro aminareo no tsy mahalala ny fomba fiasa, ary ny hafa mahalala izany saingy tsy mbola nampiasa azy io mieritreritra hoe "ho an'ny 89 cents dia tsy mendrika izany" na "Apple dia tsy hihaino ahy." Atorinay anaoNy dingana tsotra tokony harahina hitakiana ny Apple hamerina ny volanao amin'ny fividianana diso. Mazava ho azy fa miresaka antony tsara isika, manamarina ny fangatahana tsirairay i Apple ary raha tsy mahita antony marim-pototra izy dia tsy hamerina ny volanao izany. Izahay dia manome anao ny antsipiriany rehetra etsy ambany.
Mila solosaina apetraka amin'ny iTunes ianao, Tsy maninona na Mac na Windows io. Midira amin'ny iTunes Store ary kitiho ny "Kaontinao" eo amin'ny tsanganana ankavanana.
Tsy maintsy mihodina kely ianao hidina amin'ilay faritra «Tantara mividy«, Avy eo tsindrio ny« Jereo rehetra », eo ankavanany fotsiny.
Avy eo kitiho ny fividianana mifanohitra. Ny fividianana dia voakambana arakaraka ny andro, noho izany dia mila mifantina aloha ny andro nividiananao azy ianao, fipihana eo amin'ny zana-tsipìka ankavia isaky ny daty.
Io dia hanimba ny zavatra rehetra novidinao tamin'io andro io. Tsindrio ny bokotra «Mitory olana»Afaka mifidy izay rindranasa tadiavinao.
Raha vantany vao vita io dia azonao atao ny manindry ny "Report a problem" eo ankavanan'ny fampiharana.
Ny pejy Apple dia hisokatra ao amin'ny tranokala fanamoriana anao izay ahafahanao misafidy ny olana. Safidio ny iray amin'ireo safidy hiseho ao amin'ny drop-down, ary raha tsy misy mety aminao, soraty eo am-baravarankely etsy ambany fotsiny ny fitakianao. Hifandray aminao amin'ny alàlan'ny mailaka i Apple haneho hevitra momba ny raharaha.
Ny zavatra niainako manokana dia tsara foana miaraka amin'ity karazana fitakiana ity, na ho an'ny fividianana fampiharana izay tsy mifanaraka amin'ny antenaina na ho an'ny fividianana fampiharana tsy nahy. Raha manana olana ianao ary mieritreritra fa mendrika ny hamerina ny volanao dia andramo izao.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » iPad » Ahoana ny fangatahana famerenam-bola ao amin'ny App Store
Voasazy indroa aho noho ny fampiharana iTunes, ny iray tamin'ny 2/12 ary ny iray tamin'ny 11/12 tsy fahombiazako nividy ny voalohany fa ny faharoa kosa tsy manana firaketana aho, koa mangataka fanazavana aminao aho